I-iPhone 12: amahemuhemu, ukwethula nakho konke esikwaziyo - Izindaba ze-iPhone | Izindaba ze-IPhone
El I-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro ne-iPhone 12 Pro Max babezofika emakethe ngaphandle kwezinguquko ezinkulu ezingeni lokuklama ngaphandle kokuthola emaphethelweni e-iPhone 5 nekhamera yesine. Ngaphezu kwalokho, izofaka okokuqala ukusekela i-5G ukuzivumelanisa nentuthuko yakamuva ekuxhumekeni kwe-Intanethi.
I-iPhone 12: usuku lokukhishwa nentengo
Yize i-Apple ingazange iveze ukwethulwa kuze kube ngaphambi komcimbi wesethulo, iminyaka isethulo sayo esisemthethweni besingoSepthemba unyaka nonyaka, ikakhulukazi evikini lesibili, ngakho-ke kungenzeka ukuthi kulo nyaka usuku olufanayo luphindwe.
Kumele sikhumbule ukuthi i-coronavirus ingathinta kokubili ukukhiqizwa nokwethulwa kwe-iPhone 12, yize umthelela wayo kulindeleke ukuthi ube mncane. Mayelana nosuku lwayo lokukhishwa, akukho zinguquko ezinkulu ezilindelekile ngokusho kwemithombo ye-DigiTimes.
Usayizi wayo ulinganiselwa ukuthi ugcine ku 6,1 amayintshi kepha ngoshintsho olusuka ku-LCD luye ku-OLED, isilinganiso salo sokuvuselela elizokhuphuka lisuke ku-60Hz liye ku-90Hz ukuze libe nokukhonjiswa oketshezi okwengeziwe.
Uma ucabanga ngentengo yamamodeli wangaphambilini kanye nokulandela umzila ongathatha le modeli entsha, i-iPhone 12 ingadlula amanani entengo € 799 ngemodeli eyisisekelo kunazo zonke, i- € 1.000 ye-iPhone 12 Pro y € 1.200 kwe-iPhone 12 Pro Max. Izinto kulindeleke ukuthi zibize kakhulu kunezedlule, yingakho izindleko zazo ezintsha zibiza kakhulu.
Enye imodeli eshibhile bekulindeleke ngaphambili: i-iPhone 9 noma i-SE 2. Kulindeleke ukuthi yethulwe ngoMashi noma ngo-Ephreli 2020.
Idizayini ye-IPhone 12
Imiqondo yakamuva isuselwa ekuvukeni nasezindlebeni zokubheja amakhamera amane esikhundleni sezintathu kumodeli yangaphambilini, futhi imiphetho ebushelelezi okusikhumbuza i-iPhone 5.
Ngokuqondene notch, eminye imithombo ibheja kufayela le- ukuncishiswa kwe-notch esikhundleni sokunikela nge-ID yobuso. Kodwa-ke, abanye abahlaziyi bathi bungobunye bobuchwepheshe obuthuthukiswe kakhulu yile nkampani nokuthi kungazuzisa ukushiya iTouch ID kuphela.
Le khamera yesine icatshangelwa ukuthi izoba nokunemba okukhulu kokunikezwa kwe-3D wezinto, ulusizo kuzinto ezinjenge-Virtual Reality.
Uma ufuna ukwazi ifayela le- ngomzuzu wokugcina i-iPhone 12 nawo wonke amahemuhemu nokuvuza, ungaqhubeka nokufunda izindaba zabo ngezansi.
Manje usungathenga i-iPhone 12 noma i-12 Pro evuselelwe kabusha kwa-Apple
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-4 .
Njengoba nazi nonke, lesi ngesinye sezigaba zewebhu ze-Apple engivame ukuzivakashela ngezikhathi ezithile ukuze...
Uhlelo lokulungisa i-iPhone 12 ne-12 Pro enezinkinga zomsindo
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-10 .
Inkampani yaseCupertino isanda kwethula uhlelo lokulungisa noma lokufaka esikhundleni samanye amamodeli we-iPhone 12 futhi ...
Ukuthengiswa kwe-iPhone 12 akukaze kwehle njengokujwayelekile ngaphambi kokwethulwa kwe-iPhone 13
Ikota yesithathu yonyaka ye-Apple ngokuvamile ayihle maqondana nokuthengiswa kwe-iPhone, ngoba ...
Amadili ku-Apple Watch Series 6 GPS + Cellular neminye imikhiqizo ye-Apple
Ngenxa yesivumelwano phakathi kwe-Apple ne-Amazon sokuthengisa imikhiqizo yabo ngqo ngeplatifomu ye-e-commerce ...
Manje usungama nge-Apple Store bese uthatha iMagSafe Battery Pack
Por UToni Cortés kwenza Izinyanga ze-12 .
Yebo, sekukhona amabhethri akwaMagSafe we-iPhone 12 esitokweni sezitolo zakwa-Apple. Ngakho une…
IPhone 12 yehla ngaphansi kwe-iPhone 11
Sonke siyazi ukuthi imikhiqizo ye-Apple ibamba inani lazo lemakethe kahle uma isetshenziselwe…
Ibhethri elisha leMagSafe liqinisekisa ukuthi i-iPhone 12 isekela ukushaja okungenantambo okuphindayo
Por UKarim Hmeidan kwenza Izinyanga ze-12 .
Esinye sezihloko esizibambe kakhulu kuma-podcast ethu masonto onke ngamahemuhemu okuthi i-Apple ingaletha ...
I-Apple yethula ibhethri elisha le-MagSafe!
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-12 .
Inkampani yaseCupertino isanda kwethula ibhethri leMagSafe le-iPhone 12 enikeza ithuba lokushaja ...
Isikhangiso esisha siqokomisa izithombe ze-iPhone 12 Pro Night Mode
Por U-Angel Gonzalez kwenza Izinyanga ze-12 .
Ukuthuthuka kwehardware ye-iPhone kuvumela abasebenzisi ukuthi babone ukuthuthuka kokusetshenziswa okuningi ...
Ibanga le-iPhone 12 lidlula amayunithi ayizigidi eziyi-100 athengisiwe
Abafana baseConterpoint Research bashicilele umbiko othi i-iPhone 12 isivele ithengisile ...
I-Apple ishicilela uhlu lwemikhiqizo okungafanele isondele kwi-pacemaker
Ngokwethulwa kwe-iPhone 12, odokotela abebengaboni ngamehlo amahle ukwenziwa kwe ...